Fivahinianana any Roma- Italia : Hitondra ny fanohanany an’i Madagasikara ny FIDA, PAM ary ny FAO -
AccueilRaharaham-pirenenaFivahinianana any Roma- Italia : Hitondra ny fanohanany an’i Madagasikara ny FIDA, PAM ary ny FAO
Marin-toerana ny fifampitokisana ao amin’ireo mpiara-miombon’antoka. Mitohy hatrany ny fikatsahana ny tombontsoam-pirenena amin’ny fivahinianana ataon’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina any Roma- Italia. Tompon’andraikitra telo indray no nihaona taminy omaly, izay samy nanamafy ny fiaraha-miasa, ka hitondran’ny FIDA (Tahiry iraisam-pirenena ho fampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana), ny PAM (Fandaharan’asa iraisam-pirenena ho an’ny sakafo), ary ny FAO (sampandraharahan’ny firenena mikambana momba ny sakafo) ny fanohanany an’i Madagasikara. Ireo tompon’andraikitra telo tonta dia samy nametraka ny fitokisany ny filoha amin’ny fahaiza-mitantana. Nandritra ny fihaonana teo amin’ireo tompon’andraikitra telo ireo dia voaresaka bebe kokoa ny mahakasika ny fambolena sy fiompiana izay fito-piveloman’ny ankamaroan’ny vahoaka malagasy sy ny fitsinjovana ireo olana samihafa eo amin’ny lafin’ny sakafo.
Hifantoka amin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo any amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy no hifantohan’ny fanampiana entin’ny FAO sy ny PAM. Manampy sy mameno izany ny ady amin’ny valala iarahana amin’ny FAO sy ny « cantine scolaire » hiarahana amin’ny PAM.
Fanatsarana ny fari-piainan’ny tantsaha ny famatsiam-bola avy amin’ny FIDA, fantatra omaly fa hisy ny fandaharan’asa vaovao hanohizana ireo famatsiam- bola teo aloha. Ny fandaharan’asa izay hifantoka amin’ny fametrahana fotodrafitrasa goavana, ny fanofanana sy ny fanomezana fitaovana, ary masomboly ny tantsaha. Ny hampitombo ny vokatra sy ho fanomezana asa ny tanora malagasy no tanjon’ny fandaharan’asa hiarahana amin’ny FIDA. Hanampy ireo ny fampiroboroboana ny sehatry ny fikarohana eo amin’io sehatry ny fambolena sy ny fiompiana io.